Bare Sare oo Korean ah oo Madax ka Noqonaya Jaamacad Ethiopia – Rasaasa News
Bare Sare oo Korean ah oo Madax ka Noqonaya Jaamacad Ethiopia
Sep 21, 2011 Bare Sare oo Korean ah oo Madax ka Noqonaya Jaamacad Ethiopia
Professor hawlgab ka noqday Jaamacada qaranka Seoul ee koonfurta dalka Kuuriya ayaa loo magacaabay in uu hormuudka ka nodo Jaamacada culuunta sayniska iyo farsamada Adama ee Ethiopia [Adama Science and Technology University], arintaas oo noqonaysa markii ugu horaysay ee nin Koonfur Kuuriya u dhashay uu hormuud ka noqdo jaamacad Afrika ku taal.
Lee Jang-gyu waa bare sare oo 65 jir ah, horena bare sare uga ahaan SNU waaxda korontada iyo hagaajinteeda [electrical engineer], ayaa la filayaa in uu jaamacada adama shaqo ka bilaabo October isaga oo hawsha hormuudnimo wadi doona mudo 5 sano ah.
Hawshan loogu magacaabay Jaamacada Ethiopia hormuudka Kuuriyaanka ah, ayaa timid ka dib kolkii wasiirka waxbarashada Ethiopia u soo jeediyey nin kala taliya Ethiopia dhinaca jihaynta ahna Kuuriyan, in uu u helo Jamacada Adama Professor Kuuriyaan ah oo hogaamiya.
“Waxaan u malaynayaa in dalbashada Ethiopia ay ka jawaabayso sida ay diyaarka ugu tahay dhamaystirka horumarinta dhaqaalaha iyo in ay raacdo hanaanka horumarinta dhaqaalaha ee ay martay Kuuriya,” sidaas waxaa yidhi Lee.
Dhiiri galinta la taliyaha dawlada ee dhinaca Jihaynta, ayuu ku go,aan qaatay Professor Lee in uu aqbalo shaqada, ka dib kolkii uu booqday Ethiopia bishii June. “Rabitaanka iyo diyaar u ahaanshaha dawlada Ethiopia in ay ka guulaysato fakhriga iyada oo raacaysa hanaanka horumainta dhaqaale ee Kuuriya ayaa i soo dhaqaajisay,” ayuu yidhi Lee.
Waxaa kale oo uu yidhi waxaa i soo jiitay saaxiibtinimada Koonfur Kuuriya, taas oo ah in ay Ethiopia la dhinac ahayd dagaalkii Kuuriya. Wuxuu Professor Lee intaas ku daray in wasiirka waxbarashada ee Ethiopia uu fiirsado barnaamijyada TV-ga Kuuriya maalmaha shaqada laga nasto.
Jamacada Adama waa jaamacada labaad ee ugu jaamacada Ethiopia. Waxaan wax ka barta qiyaastii 20, 000 oo arday waxaana hoostaga ama ka tirsan 1,000 kuliyadood. Lee waxaa u qorshaysan in aas aaska u dhigo Iskuulka si uu ugu shaqeeyo sida Saynis iyo teknoloji maxad ah oo kale kaas oo soo saara saynis yahano baratami kara. Waxaa kale oo uu Professor Lee eeg eegayaa in barayaasha ay is waydaarsadaan Jaamacada Adama ee Ethiopia iyo Jaamacada Qaranka ee Sioul [Sioul National University].
Professor Lee waxaa uu bare sare ka ahaan jiray Jaamacada Qaranka Sioul [snu] mudo sodon sano ah , waaxda Elektroonic Injineer. Waxaa uu khabiir ku yahay hagida raadinta iyo haynta taas oo lagu jaantuso kumbuyuutarka si loo ilaaliyo dhaqdhaqaaqa gaadhiga. Professor Lee waxaa uu abaal marin shahaadada Injineering professor ka helay Jaamacada SNU. Waxaa uu haystaa shahaadada Ph.D Elektroning Injineer jaamacada Pittsburgh.
Jwxo-shiil, oo Hanjabaad Horleh Soo Saaray